Soomaalida degan Turkiga oo deeq lacageed ku wareejisay dowladda Turkiga ‘sawirro’ | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Soomaalida degan Turkiga oo deeq lacageed ku wareejisay dowladda Turkiga ‘sawirro’
Soomaalida degan Turkiga oo deeq lacageed ku wareejisay dowladda Turkiga ‘sawirro’
Xorriya.com: Sanadihii ugu dambeeyay waxaa sii kordhayay is dhexgalka iyo wax wada qabsiga bulshada Soomaaliyeed iyo Turkida ee wadankaasi kunool Soomaaliya ama Turkiga.
Waxaa siyaaday tirada Soomaalida ah ee ku nool dalka turkiga. Soomaalida dagen Turkiga ayaa ku yimid siyaabo kala duwan. Tirada ugu badan ayaa ah ardey wax ka baro, kuwaas oo iskugu jiray qaar iska bixiyo qarashaadka waxbarasha iyo nolasha iyo qaar ay dowladda Turkiga kagaala qaaday qarashka ku baxo waxbarashooda iyo nolashooda.
Waxaa jiro qoysas badan oo Soomaali ah oo ka soo guuray dalalka Heer-galbeed oo dagan Turkiiga, qaar ka furtay ganacsiyo waaweyn iyo in kale oo badan oo u joogi arrimo u gaar ah.
Sidaas si lamid ah, waxaa jiro muwaadiniin badan oo Turkish ah kuwaas oo ku sugan gudaha Soomaaliya, kuwaas oo howlo gala duwan u jooga dalka Soomaaliya.
Waxaa sii xoogeystay xiriirka ka dhaxeeyo dowladaha Soomaaliya iyo labada shacab laga soo bilaabo sanadkii 2011, markaas oo ay dowladda Turkiga si xoogan ugu soo gurmatay Soomaaliya.
Soomaalida oo taas ka duuleyso ayaa waxey billaabeen in markasto ay garab istaagaan dowladda Turkiga iyo shacabkeeda. Dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda ayaa si weyn wexey uga soo horjeesteen afgambigii fashilka iyo ceebta ku dhamaadey ee lagu sameyey dowladda uu hoggaamiyo madaxeyne Recep Tayyip Erdoğan sanadkii 2016.
Soomaalida oo ah markasto dad abaalka guda, ayaa billaabay in ay lacag ay iska soo aruuriyeen ku shubaan sanduuq laagu talagalay jaaliyadda kaalmeynta ka hortagga cudurka Covid-19. Sanduuqaan ayaa waxaa fulay oo ku dhawaaqay madaxeynaha dalkaas.
Jaaliyadda Soomaalida ee degan Turkiga ayaa sanduqaas ku shubtay lacag gaareyso 110,000 oo ah lacagta Turkiga una dhiganto $15,000 oo ah dollar-ka Mareykanka.
Wareejinta deeqdaan lacageed ayaa waxaa ka qeyb galay madaxda ka socotay dawladda Turkiga ee magaalada Istanbul, madaxada Jaaliyadaha Carabta ee Turkig iyo warbaahin badan oo Turkiga laga leeyahay.
Arrintaan ayaa muujinaeysa heerka uu gaarsiisanyahay xiriirka xoogeystay ee ka dhexeeyo dowladaha iyo shacabka Soomaaliya iyo Turkiga.
Tillaabdaan ay qaadeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkaas ayaa noqtay mid la kulantay bogaadin iyo soo dhaweyn weyn. Madaxda iyo shacabka Turkiga ayaa uga mahadceliyey Soomaalida deeqdaan, dareenka iyo naxariista ay u miijiyeen.
Soomaalida ayaa lagu tilmaamay in ay yihiin dad gudo abaalka oo dadka ka soo dhawysto ciddi garab istaag iyo taageero u muujiso.
Jaaliyadda Soomaalida ee Turkiga ayaa noqotey jaaliyadda kaliya ee sameysay arrin nuucaan oo kale ah
Warbaahinta Turkiga ayaa arrintaan si weyn waxey uga sameyeen warar, warbxinno iyo barnaajiyo. Shabacka Turkiga ah ayaa sheegay in ay aad u jecel yihiin Soomaalida, ayna u arkaan dad walaalahood ah oo ay qowmiyadaha kale ka soo dhaweystaan.
Waxaa xusid mudan in dowladda Turkiga u soo dirtay Soomaaliya seddex diyaaradood oo sidey gargaar iskugu jiray daawooyin iyo qalab caafimaad oo loogu talagalay latacaalidda iyo xakameynta cudurka COVID-19.